Mkpebi Ahịa Ahịa 5 Online Maka 2014 | Martech Zone
Mmalite nke afọ ọhụrụ na-ewetara ya atụmatụ azụmaahịa ọhụụ, mmefu ego na obi anụrị banyere ohere ndị na-echere azụmaahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-ahụ maka ịzụ ahịa na ụlọ ọrụ gị, ikike nwere ike ịba ụba. Luckily, anyị nwere ụfọdụ aro iji nyere gị aka na-eto eto gị ika na online-eso na 2014. Lee ndị 5 online ahịa amuma ịmụta taa:
1. Mechie Ọdịnaya Gị Marketing
Chọọ maka 2014 ka ọ bụrụ afọ ọzọ maka ụlọ ọrụ iji bulie ahịa ha. Nwepu okwu a bụ na ndị na-ere ahịa chọrọ oge na ngwaọrụ iji mepụta ọdịnaya pụrụ iche iji kọọ akụkọ na-egosi ụlọ ọrụ ahụ. Maka ụlọ ọrụ pere mpe niile ga-enwerịrị nri ndị na-eri ha, ọ dị mkpa ka ọdịnaya nwee ụda na-adọrọ adọrọ. Nnukwu ụlọ ọrụ nwere akụrụngwa iji tie ụda na-aga n'ihu site na iwepụta ọdịnaya ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Nke ahụ kwuru, ọ dịghị mkpa ijide Jones 'na metric ahụ naanị n'ihi na naanị 9% nke B2B na 7% nke ụlọ ọrụ B2C chere na atụmatụ ọdịnaya ha "dị oke mma." Chọpụta ihe pụrụ iche nke ọdịnaya ga-eme ka njigide na-aga n'ihu na mgbasa ozi mmekọrịta na-esote.
2. Mee ka ekwentị bụrụ ihe kacha mkpa
Chọpụta ọdịnaya maka iji ekwentị dị mkpa karịa na mbụ. Na-elele omume na-adịgide adịgide nke mkpanaka na-echepụta site na 2017 87% nke ngwaọrụ ejikọrọ ga-abụ smartphones na mbadamba. Ihe izizi hama bụ ihe na - eme webụsaịtị imebe ka websaịtị wekarie ka eleba anya na ngwaọrụ ọ bụla. Ihe na - esote na ntanetị bụ njirimara onye ọrụ dị ọcha ma dịkwa mfe iji nyere aka mee ka ndị mmadụ nọrọ na peeji gị. Ndị ọrụ ekwentị na-atụ anya ịchọta azịza ngwa ngwa na ngwa ngwa n'ihi na ha na-agagharị mgbe niile. Ọ bụrụ n’ị mee ka igodo njem gaa na azịza ha dị mfe, ha ga-alaghachi.
3. Gbasaa Mgbasa Mgbasa Ozi Gị
Inwale na mgbasa ozi mgbasa ozi ga-abụ ihe dị oke egwu na 2014 ugbu a na ndị dike abụọ ahụ, Twitter na Facebook, "na-akwụ ụgwọ iji kpọọ" na post ga-anọ naanị na ntanetịime akụkọ maka nkeji, ma ọ bụrụ na ọ bụghị sekọnd. Wepụta oge iji nwalee na netwọkụ ndị ọzọ dịka Pinterest, Instagram na Tumbler. Saịtị ndị a niile na-etolite na ọsọ ọsọ ma ị nwere ikike ijikọ ndị na-eso ụzọ site na mkpọsa okike. Google Plus bụ netwọkụ ọzọ ejiri na-emeziwanye ọkwa ha na mgbasa ozi mgbasa ozi n'afọ a. Chọta niche kwesịrị ekwesị na Google Plus nwere ike isi ike, mana uru nke nsonaazụ njin ọchụchọ dị elu ga-enyere aka mgbe niile.
4. Jiri Ihe Onyonyo Kwuo Ya
Ike nke ihe oyiyi na vidiyo dị ịtụnanya maka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị. N'ezie, ntanetị na-agbanwegharị uche ya niile na mpaghara ihu igwe. Dịka ọmụmaatụ, onyonyo dị na Facebook na-enwetakarị mmasị, nkọwa na mbak karịa ụdị nkwukọrịta ọ bụla. Na mgbakwunye, Google agbanweela nsonaazụ ọchụchọ ya iji kwalite ihe oyiyi n'elu nsonaazụ ederede. N'ezie, ịhụnanya ndị na-azụ ahịa nwere maka swiiti anya nwere ike ịbụ ihe kpatara ị jiri pịa iji lee ihe omuma a.
5. Nọgidenụ na-Ọ Dị Mfe
Ọ bụrụ na enwere otu ihe ga - eme ka ndị mmadụ nwee mmasị na afọ a, ọ bụ ozi dị mfe. Egbula n'elu ọdịnaya. Ndị ụlọ ọrụ mere ka mkpebi mkpebi dị mfe (nke pụtara iwepụta ụlọ ọrụ jargon) nwere ike ịbụ 86% nwere ike ịgbanwe ndị ahịa.
Tags: content MarketinginfographicMobile na Mbadamba ụrọSocial Media Marketing